राज्य-कानुन भन्दा रेशम बलिया !
न्यूज अभियान, काठमाडौं, ४ असार । राज्यले, कानुनले मोष्ट वान्टेड भनेर किटान गरेका रेशम चौधरी दिल्लीमा बसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री रहेकै बेलामा प्रचण्ड दिल्लीमा पुगेर रेशम चौधरीको कुरा सुने, छलफल गरेर फर्किए ।
प्रधानमन्त्री देउवा हुनासाथ उनलाई १ करोड ७३ लाख सहित कैलाली घटनाका पीडितहरुका लागि १० करोड ७३ लाख बजेट पठाइदिए । मारिने प्रहरी, मारिने दुधे बालकका आमा सबै जिल्लाराम परेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा देउवाको खिसी गरियो– दाह्री काटेको ५०, कपाल काटेको सय, मान्छे काटेको डेढ करोड ।
कैलाली नर हत्याकाण्डका योजनाकार नै रेशम चौधरी हुन् । यस्ता नर हत्याकारीलाई राज्यले पुरस्कृत गर्नुपर्ने कारण के ? लक्ष्मण न्यौपानेदेखि केशव बोहरा सम्मका प्रहरी अधिकृत र अन्य दर्जाका प्रहरीलाई आगो लगाएर समेत मारियो । तिनलाई क्षतिपूर्ति रे ।
राज्यले गरेको अनुसन्धानले समेत राजनीतिक नेता र रेशम चौधरीलाई दण्ड दिनुपर्छ भन्ने रिपोर्ट दियो । राज्यले त्यो रिपोर्टको उल्टो काम गरेपछि सबैले जिब्रो टोकेका हुन् ।
भाला रोपी–रोपी र सुतेको बालक मार्ने अपराधीले यसरी पुरस्कार पाउन थालेपछि देशमा अपराध पन्पिन्छ कि पन्पिन्न ? असार १४ को निर्वाचनमा यत्ति कामले प्रम देउवाले सुदूरपश्चिममा चारतारे भण्डा फहराएर नाक फुलाउने अवसर पाउलान् त ?